Ride Koowheel Electric Rubber ukuya naphi na - Jomo Technology Co., Ltd
Ride Koowheel Electric Rubber ukuya naphi na
Xa ukudla mihla ubomi, kuba inkoliso yomqala emhlophe, imisebenzi yangaphandle uyakholiswa kakuhle ngempelaveki. Apha kuza umbuzo: njani ukuya kwindawo bengavani? KOOWHEEL Electric Rubber uya kuba ukhetho ebalaseleyo abo bafana nendlela kunye namantombazana. Oku kuthetha ukuba akukho mfuneko yokuba ubunzima ukusuka kwemikrozo yeemoto ngokuthatha ibhasi mzi, kude engaphantsi ephithizelayo. abo bantu abatsha inzondo. Ukuba ukhetha isithuthuthu Rubber, unako veki yakho emangalisayo wenze into onomdla kuyo. Afana kokwenyuka, Dlala Badminton nokuba Pick amaqunube. Akadla kuphela veki eyonwabileyo kodwa kwaphucula ulwalamano kunye nabahlobo. Ngoko ke, Ride Koowheel Electric Rubber iza kuba yimpendulo enhle. Yini na ukuba ukhethe Koowheel E-Rubber ?
Okokuqala, ngokuba zezona efikelelekayo Rubber zombane kunye pack ibhetri ngokulula replaceable. Kuye yenzelwe kuphela brushless, mbini ngo-wheel Motors hub,yeBluetooth ulawulo wireless remote kwaye izaleko 7 maple eyomeleleyo eKhanada ukuba bhetyebhetye. Ngesantya esiphezulu kuyinto 40km / h kwaye onwabele nenkululeko ukuya naphi edolophini oyikhethayo ngaphandle guzzling igesi okanye ebila kuzo zonke ukuhamba okanye ukuqhuba ibhayisikile. Wena nokuba angabeka engxoweni niyise ukuze naphi na, ke imisebenzi kuphela yangaphandle okanye indlu ikofu.
Le Koowheel Rubber yombane wadalwa kwengcinga elula ukuba wonke umntu kufuneka akwazi ukufumana lula ukuba iteknoloji kudala. Thina musa ukucinga ukuba Rubber zombane yinto yokudlala nje bokuhlela ezimbalwa. Kwixesha elizayo, kuya kuba brand new uhlobo indlela yokuthutha. Yeyona i isithuthi ezonga umbane. Ngokuqinisekileyo ukhetho elitsha kwithuba elifutshane abakhweli, ukuya eklasini, wevenkile nangenxa yokuhamba nokuthenga ngaphi? Yintoni kuba kuhle ngaphezu kokuba nako ukuhamba ngokukhululekileyo ababekweso sixeko? Ukuba kulula ukukhwela nje Rubber rhoqo. Ukusebenzisa ulawulo kude nonke nina kufuneka ukuba uyenze eme ebhodini aze onwabele ride.